गायक चिप्लिएको पनि त हुनसक्छ!
भद्रगोल शर्मा | Published on 2019-02-27 |
केही साताअघिको कुरो । अमेरिकातिर यौटा देशमा केके खैलाबैला भयो रे । त्यही छेको पारेर यता नेपालका एकजना गौरवशाली कामरेडको जिब्रो चिप्लियो रे । चिप्लिएको कुरो कामरेडकै सहअध्यक्ष र स्वघोषित को-पाइलट कामरेडले भनेपछि हामीले पत्याउनै पर्‍यो । केही दिनसम्म कामरेडको जिब्रो साँच्चै चिप्लिएको होकि हैन भन्ने विषयमा दुविधा भयो । कामरेडहरुबीच नै दोहोरी चल्यो ।
कामरेड नम्बर १ – मने, मैले ठोकेकै हुम् । खोकेकै हुम् ।
कामरेड नम्बर २ – हैन, त्यसो कहाँ हुनु । उहाँको जिब्रो चिप्लिएको हो ।
कामरेड नम्बर १ – मने, म कहाँ चिप्लिनु अडिएको अडियै छु त ।
कामरेड नम्बर २ – उहाँलाई अडिएजस्तो लागेपनि वास्तवमा चिप्लिएकै हो ।
कामरेड नम्बर १ – मने, संस्था भन्या संस्था नै हुन्छ । व्यक्ति भन्या व्यक्ति नै हुन्छ । संस्थाले बोलेपछि व्यक्तिको टिप्पणीको अर्थ छैन । म अडिएकै छु ।
कामरेड नम्बर २ – व्यक्ति/संस्थाको कुरो जेजे भएनि उहाँ चिप्लिएकै हो ।
यसप्रकारको दोहोरी सुनेर छक्कै परेका जनताले सुरुमा कामरेड अडिएको जस्तो, फेरि चिप्लिएको जस्तो, फेरि अडिएको जस्तो, फेरि चिप्लिए पनि अडिरहेजस्तो अनुभुति गर्दै थिए । आखिर जनता न हुन् केही दिनपछि आफै कुरो बुझेजस्तो गर्न थाले । र, अन्ततः यो प्रसङ्ग त्यसै सेलाइगयो ।
मौसम विभागले गरेको अनुमान बमोजिम हिउँदे झरी लाग्ने र रोकिने भइरहेकै बखत बजारमा अर्को उल्का फैलियो । युट्युबमा यौटा गीत आएछ । डबल नेकपाको झन्डापनि समेटिएको गीत भएकाले सत्तापक्षका होनहार युवा कार्यकर्ताले 'करिअरमा असर पर्ने' विषयमा सचेत गराउनासाथ गायकले हत्तपत्त गीत युट्युबबाट हटाएछन् । उप्रान्त गीतको रोइलो देशभर फैलियो ।
अनि त के चाहियो ? गीत हिट । गायक हिट । सँगसँगै नेतापनि हिट ।
सो गीतको विषयमा संसद्‍को बैठकमै दोहोरी सुन्न पाइयो । माननीयहरुकै बीचमा धुमधाम चलेको दोहोरीले बजारको तातोलाई सेलाइहाल्न दिएन । आखिर हिउँदका दुईचार दिन कटाउने मेलो त्यही भयो । चोक, चौतारी, चियापसल सबैतिर मान्छे दुई कित्ता भए । एकातिर गीत सय प्रतिशत ठीक ठान्ने माननीयका कार्यकर्ता, अर्कोतिर सय प्रतिशत गलत भन्ने माननीयका कार्यकर्ता ।
माननीयहरुको प्रस्तुति निकै रोचक र घोचक । त्यो दोहोरी कथंकदाचित् 'नेपाल आइडल'को मञ्चमा भैदिएको भए निर्णायकले दुईटै पक्षलाई प्रथम घोषणा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला ।
माननीय नम्बर १ – यी त जनताका गायक पो रहेछन् । मेरो एक महिनाको तलबबाट पच्चीस हजार यिनलाई अर्पण गर्छु, सभामुख महोदय ।
माननीय नम्बर २ – सभामुख महोदय, पूर्ववक्ता माननीयले गायकलाई पच्चीस हजार दिने कुरो गर्नुभो । यो गीत माननीय स्वयंले गाएको खण्डमा मैले पूरै एक महिनाको तलब टक्र्याउँछु ।
एवंरीतले सर्वत्र चर्चा भएको गीत हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कानमा नपर्ने कुरै भएन । लहै! यो विषयमा के पो आउने हो भन्ने भावमा प्रधानमन्त्रीलाई सुनिरहेको लोकले जवाफ पायो – 'यौटा केटोले गाएको गीत जनताले मन पराएनन् र युट्युबबाट हट्यो ।' प्रधानमन्त्रीले यस्तो निचोड दिएपछि उग्र बहस मत्थर भयो ।
जताजता जसरी जति मात्रामा बहस भएपनि त्यसले भद्रगोल शर्माको खसखस भने मेटिएन ।
विगतमा कहिले रुमानी प्यारको मर्म उरालेर हिट हुने, कहिले सारा देश नतमस्तक भएका नारानहरुको तुजुकलाई नै खिसीटिउरी गरेजस्तो भावमा 'जापान पनि यही, अमेरिका यही...' भन्दै राष्ट्रभक्तिका भाका हाल्ने, कहिले अल्लारे प्रेम र बुढ्यौलीका कथा गाउने अनि कहिले प्लस साईजकी नारीबारे 'रङ्गशाला जत्री छ...' भन्दै नारीवादीहरुले थाहा नपाउने गरी पात्तिने गायक चिप्लिएको पनि त हुनसक्छ!
जहिलेसुकै जुनसुकै धारतिर पनि बहकिन सक्ने, जता कोल्टो भेट्यो उतै चिप्लिन सक्ने ठिटो गायक चिप्लिएको पो होकि भनेर शंकाको सुविधा लिने चेष्टा किन कसैले गरेन ?
यौटा प्युसो गायकमाथि सबैजना यसरी किन खनिएका ?
अरे यार! मन्त्री, प्रधानमन्त्री, बडेबडे कलाकार र अनेक धन्दाका हिरोहरु बखत बखतमा चिप्लिरहने, उत्तानो परिरहने देशमा यौटा गायक चिप्लिन नपाउनु ? यो त गलत नजिर भएन र ? प्रतिपक्षले भनेजस्तो अधिनायकवाद यसैगरी पो आउने होकि ? यी प्रश्नको उत्तर कसले देला ।